Naagtu waa Boqolleey sida uu ninkuba u yahay Boqollow. Naagta waa loo dooran karaa Madaxtinimo iyo Qaadinimaba sida ninkaba loogu dooran karo.
Naagtu Kama yaraysato dhaxalka ninku qaato, mana ku kala duwana nin iyo naagi dhaxal qaybin, balse waxaa jira xisaabo kale duwan si cadaalad loo sugo.
INTAAS KA HORSE WAXAA IGA XUSUUSIN AH
Waxa aan u hibeeyey
OO LOO EEGAYO SHARIICADA
(Sil. Dum. Lam: 4)
Naagtu waa Boqolleey sida uu ninkuba u yahay Boqollow.
Naagta waa loo dooran karaa Madaxtinimo iyo Qaadinimaba sida ninkaba loogu dooran karo.
Naagtu waxa ay furi kartaa Markhaati kaste si la mid ah sida ninkuba ugu furi karo nooc kaste oo dacwo markhaati ah, haba dhacdo in axyaalah daymaha ganacsiga ku saabsan si gooni ah loo eege.
Intaas oo dhan ayaan leeyahay, aniga oo xujjo ahaan u cuskanaya Quraanka iyo Sunaha, ee bal car waa sheekha keena daliil caqli gal ah oo ka soo horjeedda daliilaha aan ku caddaynayo (buuggaan gudihiisa) intaas aan soo sheegay oo dhan ama mid ka mid ah.
INTAAS KA HORSE WAXAA IGA XUSUUSIN AH:
FADLAN SI DHAB AH OO KA FIIRSI LEH U WADA AKHRI KITAABKAAN, KA DIBNA HADAAD KA HESHO GEF KA SOO HORJEEDA DIINTA ISLAAMKA, KAALAY OO ANIGA AFKA IGA DHOOBEE. HADAADAN WADA AKHRIN AMA AADAN KU EEGIN IL CADDAALADEED IYO CAQLI ADEEGSI YAANAAN ISKU DAALIN EE KU SII MAQNOW SIDAADA. TAN UGU DAMBAYSANA WAXA AY IGA TAHAY FADLAN HUBSO WAX KASTE OO KUGU CUSBOONAADA AAD GAARTID XAQIIQADE.
Silsiladaan cilmi baariseed ee la xiriirta xuquuqda dumarka oo laga eegayo dhanka Shariicada Islaamka, waxa ay garab socotay diyaarintii silsiladda kale ee ku wejahnayd siyaasadda Soomaaliyeed iyo weliba tii dhaqan celineed. Saddexda silsiladoodba waxa ay ku jireen hawlaha uu qabtay xaafiiska “Hanuun” ee u gaarka ah Qaasim X. Farah, xilligii 1996/97. Cilmi baaristaani waxa ay ku salaysan tahay hab ah dhaqan bulsho iyo sharci (Socio-legal aspect).
Marka aan ku gaabinno warbixinta ujeeddada buug yarahakan ina hor yaalla, waxa uu buugani ka galayaa silsiladda lambarka saddexaad. Lambarka koowaad ee silsiladdaan lagu magacaabay “Dum” oo laga soo gaabiyey “Dumar” waxaa ku jira buugga uu ciwaankiisu yahay; “Magdhawga Dumarka oo loo eegayo Shariicada”. Lambarka labaadna waxaa ku jira; “Maragfurka Dumarka oo loo eegayo Shariicada”. Labada buugba waa ay soo bexeen, akhristuhuna waxa uu haleeli karaa akhriskooda.
Buug yarahakani isagu waxa uu ka jawaabayaa su’aasha ah: miyey qof haween ihi u noqon kartaa dawlad ama qoon madax? Ha ahaato boqorad, madaxweyne, wasiirad, qaaddiyad, iwm. Sidaa si la mid ah miyey qaadi kartaa wilaayad ruux kale? Miyey nikaax xiri kartaa? Miyey is bixin kartaa guur ahaan? Miyey naag kale bixin kartaa? Iwm. Waxa kale oo uu iyana dulmar guud ku samaynayaa mas’alooyin ku saabsan Imaamnimada salaadda, in ay qof haweeney ihi salaad tujin karto iyo in kale. Jawaabaha su’aalahaas oo idili waa kuwa ay jawaabtoodu ka dhex dhaalayso akhriska qoraalkaan. Iyada oo si caddaalad iyo xaq doonnimo ah wax walba lagu baarayo ayaa ruux kaste oo macquul ihi ku qanci karaa habka ay daraasaddani u soo taabanayso xaqiiqda jawaabtaan.
Waxaa halkaan lagu soo ban dhigay dhammaanba xujjada iyo caddaymaha ay cuskanayaan wadaada aaminsan in aysan dumarku xil maamul iyo madaxtinimo qaadi karin. Intaa ka dib waxaa halkaan lagu caddaynayaa tafsiirka iyo dhiraandhirinta caddaymahaas iyaga ah. Waxaa markaa ka bacdi ay cilmi baaristu ku tusinaysaa caddaymaha ay haystaan culimada ku doodaysa in ay haweeneydu xaq u leedahay in laga qayb geliyo xilalka maamulka qaranka halkii ay hawshu kaga soo aaddaba.
Intaa ka bacdi waxaa lagama maarmaan ku noqonaysa daraasadda in ay madaxa la gasho dhawr mas’alooyin oo iyaguna la lahaanaya mawduuca xiriir dadban. Waxa ay mas’alooyinkaasi kala yihiin guud ahaanba mas’alooyinka la xiriira waxtarka dumarku ay ka geysteen u soo halgamaidda Islaamka, diin faafiska, jihaadka, siyaasadda, nafaqaynta iyo kobcinta dawladda Islaamka ah. Sidaa si la mid ah xorriyadda ay qofka dumar ihi u lahaan karto in ay soo xushaan ama ay guursadaan ninka ay ku qanacsan tahay.
Ugu dambaystiina waxa ay cilmi baaristu xogga saaraysaa ka jawaabidda su’aal kale oo iyana miiska imaanaysa marka laga jawaabo guud ahaanba kuwii aan soo xusnay. Su’aashaasi waxa ay tahay in la is weydiinayo; kol haddii ay culimadii hore bixiyeen jawaab aysan toos uga qaadan kitaabka Quraanka ah ama sunnaha, ee ay ku heleen dariiqyo ku yimid dadaalkooda ay nafhurnimo ku baxsheen – ijtihaad. Hase ahaatee aysan jawaabahaasi qancinin kuwa maanta jooga, miyey culimada dambe xaq u leeyihiin in raadsadaan jawaab u dhaanta tii hore, mise waa reebban tahay in laga daba hadlo culimadii hore?.
Sidaa darteed waxa mudan in halkaa lagaga hadlo waxa ay culimadu u yaqaaniin “Ijtihaad” iyo dawrkiisa uu ku leeyahay cilmi sharci baarista maanta jirta.
Waxa kale oo ugu dambeeya qoraalkaan dardaaran uu qoraagu u soo jeedinayo akhristaha. Dardaarankaasi waa mid uu qoraagu ugaga digayo akhristaha in ay soo xaluulato musiibada ah in si qalad ah wax loo fahmo, ama loo qaato hadal si aan loo odhan. Taasi waa mid uu akhristuhu ama wax baaruhu uga bixi karo si fudu haddii uu adeegsado daacadnimo iyo niyad samaan, tiiyoo uu qalbigiisa ka sifaynayo feejignaan shareed.
Waxaa kale oo iyana haboon in uu akhristuhu qalbiga ku qabsado sidii uu ku gaari lahaa fahamka ujeedada qoraalkakan. Waxa aan dhab ahaantii ku boorinayaa guud ahaanba akhristayaalka qiimaha leh in ay isla barbardhigaan waxa ay horay uga aamisanaayeen mas’alooyinka diiniga ah ee aan halkaan ku xusay iyo waxa aan hada soo bandhigay. Ka dibna ay dagaal ka hor isku dayaan in ay doon doonaan waxa maslaxadu ay noqon karto, iyada oon aakhirana dambi loo xambaaranaynin adduunkana aan cidna lagu dulminaynin. Midda kale iyada oo la isku colaadinaynin ama la isku ximinaynin kala nooc ahaan jinsi ee ku dhisan lab iyo dhedig.
Midda ugu dambaysa ee aan ka dardaarmayaa waxay tahay akhristow intaadan eeginin waxa uu qoraagu aaminsan yahay iyo cido kale oo ka dambeeya toona ma eegi kartaa heerka ay dumarka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba kuwa adduunku joogaan, iyo heerka aan qoraalkaan iyo kuwa kale ee ku lamaansan sida: Maragfurka Dumarka oo loo eegayo Shareecada iyo Magdhawga Dumarka oo loo eegayo Shareecada sida bayaanka ah kaga akhrinayno inaga oo ku tiirsan Quraanka iyo Sunnaha, ama guud ahaanba nidaamka Shareecada.
Waxa aan Eebbe weyne, wax walba oge, awoode ka baryeynaa in uu ina wada waafajiyo tubta toosan ee aan taraanturada lahayn.
Waxa aan u hibeeyey:
Gabdhaha Soomaaliyeed ee jira Qarniga kow iyo labaatanaad, oo aan ka rajaynayo in ay ka soo dhalaalaan kaalintooda waajib ahaaneed ee ka saaran adeegga bulshada.